XOG: Khilaaf ka dhex qarxay Farmaajo iyo Khayre muxuu salka ku hayaa? – Puntland Post
Posted on November 30, 2019 November 30, 2019 by CCC
XOG: Khilaaf ka dhex qarxay Farmaajo iyo Khayre muxuu salka ku hayaa?
Ilo’ wareedyo kala duwan, ayaa warbaahinta Puntland Post u xaqiijiyay, in uu khilaaf iyo kala shaki soo dhex-galay madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Xassan Cali Khayre, tan iyo markii Farmaajo la kulmay madaxweynayaashii isaga ka horreeyay ee Xassan Sheikh iyo Sheikh Shariif.
Khilaafkaasi, ayaa sida la sheegayo ka dhashay shaki uu Ra’iisul wasaare Khayre ka muujiyay, kulamadii dhexmaray Farmaajo iyo labadii madaxweyne ee ka horreeyay, balse isaga aan wax door ah laga siin, islamarkaana booskiisi lagu beddelay Taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Ra’iisul wasaaraha, ayaa wixii xilligaasi ka dambeeyay bilaabay, abaabul xooggan oo ku wajahan in uu loollan adag la galo madaxweyne Farmaajo, isagoo aaminsan in uu jiro heshiis ka qarsoon oo ay si hoose u wada-galeen Farmaajo iyo madaxdii ka horraysay.
Inkastoo khilaafka huursan ee labada mas’uul, aysan cidna qiyaasi karin halka uu ku dambeyn doono iyo cidda libintu ku raaci doonto loollanka adag dhex-dooda ka bilowday.